रोहित सहित ५ सिनियर खेलाडी साग टोलीमा ! » Nepal Fusion	Nepal Fusion	रोहित सहित ५ सिनियर खेलाडी साग टोलीमा ! » Nepal Fusion
रोहित सहित ५ सिनियर खेलाडी साग टोलीमा !
२०७६ साउन १७ गते शुक्रवार
काठमाडौं । अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले रोहित चन्द सहित ५ सिनियर खेलाडीलाई सागको बन्द प्रशिक्षणमा समावेश गर्ने भएको छ । उमेरसमूहको खेलाडी सहभागी हुने सागमा बढीमा तीन जना सिनियर खेलाडी राख्न पाउने प्रावधान छ ।
सोही अनुसार एन्फाले रोहित सहित पाँच खेलाडीलाई प्रारम्भिक टोलीमा समावेश गरेको छ । २३ बर्ष माथिको सिनियर खेलाडीमा रोहित सहित बिक्रम लामा, किरणकुमार लिम्बु, सुजल श्रेष्ठ र नवयुग श्रेष्ठ रहेका छन् ।
नेपाली टिमका मुख्य प्रशिक्षक बालगोपाल महर्जनले आवश्यकताका आधारमा अन्तिममा तीन सिनियर खेलाडी छनोट गरिने बताए । एन्फाले सागको पुरुष फुटबलको जिम्मेवारी महर्जनलाई दिएको छ ।
नेपालको राष्ट्रिय टिम विश्वकप छनोटमा व्यस्त हुने भएकाले उमेर समुहको टोलीको जिम्मेवारी महर्जनले पाएका हुन् । नेपाल साग फुटबलको साविक विजेता समेत हो । १२ औ दक्षिण एसियाली खेलकुद सागको पुरुष फुटबलमा नेपालले स्वर्ण जितेको थियो ।
सागलाई लक्षित गर्दै नेपालले बिहिबारबाट औपचारिक रुपमा प्रशिक्षण आरम्भ गरेको छ । मुख्य प्रशिक्षक महर्जनले प्रारम्भिक रुपमा ४५ खेलाडीलाई प्रशिक्षणमा समावेश गरेका छन् ।
‘पहिलो चरणमा ४५ खेलाडीलाई तयारीको लागि बोलाएको छु । नियम अनुसार ४० खेलाडी बोलाउन पर्ने थियो । बीचमा केहि समस्या देखिन सक्छ भनेर ४५ जना बोलाएको हो ।’ महर्जनले भने ।
एउटै मैदानमा धेरै टिमको तयारीले गर्दा यू–२३ टिमको तयारी भने आईबारबाट नियमित हुने प्रशिक्षक महर्जनले बताए । ‘अहिले मैदान खाली छैन । विहान राष्ट्रिय टिमको तयारी भैरहेको छ । दिउसो क्विक्स कप छ । फेरि बेलुकी महिला टिमको तयारी चलिरहेको छ । त्यसैले हाम्रो समय निश्चित भएको छैन । अब आईतबारबाट समय पनि तय हुन्छ ।’ उनले भने ।
राष्ट्रिय टिमको तयारीमा टिममा बोलाईएको नाममा देश बाहिर रहेको स्ट्राइकर विमल घर्ति मगर, गोलरक्षक अर्पण कार्की र रोहित चन्द रहेका छन् । बिमल माल्दिभ्सको धिवेही प्रिमियर लिगमा ब्यस्त रहँदा अर्पण भुटानी लिगमा छन् । यस्तै रोहित भने इन्डोनेशियन लिगमा रहेका छन् ।
उनीहरु भने आवश्यकता परेको बेलामा टिममा समावेश हुने प्रशिक्षक महर्जनले खेलपाटीलाई बताए । ‘उनीहरु बाहिरी लिगमा ब्यस्त छन्, आवश्यकता अनुसार टिममा बोलाईनेछ ।’ उनले भने ।
राष्ट्रिय टिमको प्रशिक्षणमा नरहेका खेलाडीलाई समावेश गर्दै महर्जनले प्रशिक्षण थाल्नेछन् । नेपालको सिनियर टिम अहिले विश्वकप छनोटका लागि प्रशिक्षणमा व्यस्त छ ।